Ithegi: uphononongo lukagoogle | Martech Zone
Ithegi: uphononongo lukagoogle
Kutshanje bendifunda iposti evela kuJoel Comm malunga nokuhamba kweFine Line Relocation Movers. Ibali elothusayo leshishini eligcwele izithiyelo kunye neendlela zokutshintsha. Ndakhe ndagcinwa ndathinjwa ngumhambisi owayengazukukhulula impahla yam emva kokuhamba kwesizwe ndide ndibabhatale imali yokunyuka izinyuko. Inqwelomoya yesibini, ngasendleleni, yayiyeyokunyathela enye kunesivumelwano sabo
Sibe nengxoxo eqinileyo kumsitho wobunkokheli bengingqi ekuqokeleleni uphononongo kumashishini nakubathengi kwi-intanethi. Ininzi yengxoxo yayijikeleze uphononongo oluhlawulelweyo okanye abathengi abanomvuzo kuphononongo. Andilogqwetha, ke ndiyakucebisa ukuba uthethe nelakho ngaphambi kokuba undiphulaphule. Indlela endime ngayo kule ilula… sukuhlawula okanye uvuye ukuphononongwa. Unokungavumelani nam, kodwa kanye njengoko ishishini lokuphanda ngezinto eziphilayo lafunyanwa ngamanani anyusa ubuxoki,
Kungekude nje sibe nodliwanondlebe oluhle noDaniel Lemin, umbhali weManipu Uthethe ngokubaluleka kokuthimba uphononongo ukwenzela ukuba uphonononge ngokutsha kunye nokulwa nakuphi na ukuphononongwa okungalunganga okungavela ngamanye amaxesha. Ngaba likho ixesha elingcono lokufaka uphononongo olukhulu kunokuba nje emva kokuba umthengi onelisekile eshiye ishishini lakho? Mhlawumbi hayi - ke kutheni kungenjalo